Miverina indray ny taloha !
Hanana fahefana feno manomboka anio ireo mpitondra nanana ny tantarany tsy dia tsara tamin’ny firenena tany amin’ny 10 taona lasa.
Mila fisokafana !
« Izao tontolo izao dia masoko sy sofiko avokoa », hoy ny Ombalahibemaso na ny mpanjaka Andrianampoinimerina.
Ny zava-drehetra izay mety hitranga dia tsy maintsy misy fambara avokoa.
Ny voa nafafy ihany no hojinjaina ary miankina amin’izay atao ny mety ho vokatra ho azo fa tsy isan’andro akory ny fahagagana. Efa ela no nanambarana fa zava-miseho sy atao eto amin’ny firenena ankehitriny dia tsy hisy hitondra any amin’ny fahombiazana sy fampandrosoana satria ny efa nataon’ny teo aloha ihany no “mody” amboamboarina kely dia izay ve no lazaina hoe vina ? Efa hita fa miha sahirana ny Malagasy ary maro amin’ireo mpanao politika aza moa no nilaza tamin’ny fotoan’androny fa mety tsy ahandry 2018 izany intsony. Isaorana anefa ny mpahary fa mbola ireto mitsipozipozy eto ireto isika mianakavy. Midangana ny vidim-piainana ateraky ny fivadibadihan’ny vidin-tsolika, manjaka ny tsy fandriampalemana, manjaka ny kolikoly, ny fibodoana tany sy fananan’olona aza moa dia efa ny fitondrana mihitsy no nalaza ratsy tao anatin’ny teo imason’ny sehatra iraisam-pirenena. Raha oharina amin’ny olombelona ny firenena dia azo lazaina fa marary itoeran’ireo fahalovana toy ny otrik’aretina maromaro voatanisa teo ireo. Dikan’izay, azo tsaboina. Azo sorohana. Tsy aleo ve misoroka ary? Hampihavanina haingana izay tokony hiavana. Hampifanarahana izay tokony hifanaraka. Avy eo mba samy miara-mibanjina izay hampandroso amin’izay.